Sida loo Doorto kuraasta Miiskaaga Cunnada
Wac Taageer 86-13682157181
Caag caag ah
Wararka & Isbeddellada
Waa tan sida loo xusho kuraasta miiskaaga cuntada:
Raaxo ahaan, miisaaniyada u gaarka ah miiskaaga cuntada iyo kuraasta waa inay iswaafaqaan.
Haddii aad ka cabbirto dusha sare ee miiska illaa dabaqa, miisaska cuntada badankood waxay u dhexeeyaan 28 illaa 31 inji dherer; dhererka 30-inji waa midka ugu badan. Kursiga dusha sare ilaa dabaqa, kuraasta cunnada badanaa waxay u dhexeeyaan 17 illaa 20 inji dherer. Taas micnaheedu waa masaafada u dhexeysa kursiga iyo miiska dushiisa wuxuu noqon karaa meel kasta 8 ilaa 14 inji
Celceliska qadada wuxuu helaa masaafo 10 ilaa 12 inji ah midka ugu raaxada badan, laakiin wuxuu ku kala duwan yahay dhumucda miiska dusha sare, dhererka apron, iyo cabirka qadada.
Si aad uhesho fogaan-dherer-ilaa-miis-masaafad-yar oo raaxo leh, waxaad tijaabisaa miis (ama miisas) oo ay ku jiraan isku-darka kuraas kala duwan.
Kaliya ha cabbir miiska dushiisa ilaa kursiga. Haddii miisku aanu lahayn wax xayr ah, ka cabir miiska hoose ee miiska korkiisa ilaa darafka sare ee kursiga kursiga. Haddii miisku leeyahay biibiile, ka cabbir xuubka hoose xagga sare ee kursiga.
Fiiro gaar ah u yeelo haddii kursiga kursigu adag yahay ama la nadiifiyay. Kuraasta kacsan ayaa u cadaadinaysa markaad fadhiisato. Haddii suufku qaro weyn yahay, isku qasidda ayaa noqon karta mid wax ku ool ah. Si aad u hesho akhrinta saxda ah, ka cabir kursiga kor ku xusan ilaa fadhiga inta madhan, ka dibna qof ha kuu cabiro mar kale inta aad fadhido. Ku dar farqiga u dhexeeya labada masaafadaada miiska-kursi ee kuugu habboon.
Ballaadh iyo Qoto dheer
Miisaanku kaliya maahan dhererka isku habboon. Waxaad sidoo kale u baahan tahay kursi run ahaan ku habboon miiska hoostiisa.
Adress: Galbeedka wadada langda, tuulada Fengliu, Shengfang magaalada, Magaalada Bazhou, Hebei gobolka, Shiinaha.